Turkiga Oo Dadaal Galinaya Wada-Hadal In Lagu Xalliyo Dacwadda Badda Ee Soomaaliya Iyo Kenya – somalilandtoday.com
(SLT-Istanbul)-Dowlada Turkiga ayaa ka shaqeynaysa sidii Soomaaliya iyo Kenya la isugu keeni lahaa miiska wada hadalka si loo xalliyo dacwada badda ee u dhexeysa labada dal, iyadoo dacwadan ay taallo Maxkamada Caalamiga ee Cadaaladda.
Wasiirka Arimaha Dibada Mevlüt Çavusoglu uu booqan doono Kenya iyo Soomaaliya horaanta bisha soo socota halkaas oo la filayo inuu kula kulmo Madaxweyne Maxamed Farmaajo iyo Uhurro Kenyatta oo labaduba bilihii lasoo dhaafay xidhiidhkoodu aanu wanaagsanayn.
Ankara waxay u aragtaa inay ka faa’iideysaneyso xidhiidhka wanaagsan ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya maadaama ay ganacsi kala dhexeyso labada dal waxayna u aragtaa inay yihiin aasaas ay ku xoojin karto saameyntooda kaliya mandiqadda Bariga iyo Geeska Afrika laakiin guud ahaan qaaradda.
Maxkamadda Caalamiga ah ee Caddaaladda ayaa tuurtay codsigii Kenya ee bishii hore markii afaraad oo dib loo dhigo kiiska waxayna xukuntay inay dib u bilaabato 15-ka March Waxaa la filayaa inay soo gabagabeyso kiiska sannadkan oo ay soo saarto xukun kaas oo ah mid qasab ah oo aan rafcaan laga qaadan karin.
Xidhiidhkii xumaa ee ka dhexeeyay Muqdisho iyo Nairobi toddobaadyadii la soo dhaafay oo arkay burburka xidhiidhka diblomaasiyadeed ayaa sidoo kale qeyb ka noqon doona ajendaha Çavusoglu ee gobolka.